कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: नगरपालिका सँधै यस्तै जागरुक हुने हो कि !
नगरपालिका सँधै यस्तै जागरुक हुने हो कि !
गत मंसिर ७ गते शनिवार विहानै नगरपालिकाका कर्मचारी रामकृष्ण महर्जन एउटा पानी ट्यांकि र दुईजना मानिसहरू लिएर कीर्तिपुरको प्रवेशद्वार नयाँबजारमा देखा प¥यो ।स्थानीय व्यक्तिहरू उत्सुक भएर हेर्न थाले । पानी ट्यांकीमा प्लाष्टिकको ठूलो पाइप जोडियो । पानी ट्यांकीबाट पानी बहन थाल्यो । त्यसबाट प्रवेशद्वारको उत्तरतिर रहेको पेटी धुन थाल्यो । धुलोले भरिएको पेटीमा बिछ्याएका सिमेन्टका ईंट्टा चम्किन थाले ।आज कीर्तिपुरको इन्द्रायणी जात्रा, जात्रा हेर्न आउने पाहुनाहरूलाई कीर्तिपुर सफा सुग्घर भएको देखाउन पेटी सफा गरेको रहेछ । जात्राको अवसर पारेर भएपनि पेटी सफा गरेकोमा नगरपालिकालाई धन्यवाद दिनै पर्छ । त्यस पेटीको छेउमा ठाउँ ठाउँमा सिमेन्टको गोलाकार चक्काहरू राखिएका छन । कीर्तिपुर नगरपालिकाका कर्मचारी रामकृष्ण महर्जनसँग त्यो चक्का किन राखेको भनेर सोध्दा त्यसमा हरियो विरुवा राख्ने बताउनु भयो । अहिले नै राख्न पाएको भए झन कति राम्रो हुन्थ्यो । तर नगरपालिकाको काम कहिले जाला घाम भनेझै भइरहेको छ ।
नयाँबजार तथा कीर्तिपुरको रिंगरोड क्षेत्रमा सडकको पेटीमा सामान राखेर व्यापार गर्नेहरूलाई ती सामान हटाउन ३ दिनको समयसिमा राखेर सूचना टाँसेको र माईकिंग गरेको पनि १५ दिन नाघिसकेको छ । तर पनि सडक पेटीमा पसल राख्नेहरूले हटाएका छैनन् । यसमा नगरपालिका निरह देखिन्छ । स्थानीय व्यक्ति÷क्लबहरूसँग समन्वय गरेर गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । जेहोस अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्नो उपस्थिति जनाउन थालेको छ । यस्तो सक्रियता बढ्दै जाओस भनेर स्थानीय व्यक्तिहरूले कामना गरेका छन ।